बाढी पीडित भन्छन्: ठाउँ नै छैन, घर कहाँ बनाउनु ? | Nagarik News - Nepal Republic Media
बाढी पीडितले जस्ता पाता पाएपछि जोहो गरेर सुरक्षित स्थानमा राख्न लैजाँदै । तस्बिर: अमर
१७ भाद्र २०७४ ५ मिनेट पाठ
इटहरी-इटहरी वडा नं. ३ की ७० बर्षीया धनमाया खातीको घर बाढीले क्षती पुर्‍याएपछि यतिबेला बस्तीभन्दा पश्चिमतर्फको सडकमा त्रिपाल मुनी दिनरात कटाउने गरेकी छन् । शारीरिक रुपमा कमजोर उनलाई पानी पर्दा भुईंमा चिसो हुने र घाम लागेको बेला गर्मी हुँदा समस्या छ ।
४० बर्षीया सीतालाई पुरानै स्थानमा घर बनाउँदा बाढीले लैजाने चिन्ता छदैंछ । ‘अब पुरानो घर भएको स्थानमा नयाँ बनाउँदा पनि फेरि बाढीले लैजाला, अर्को स्थानमा जग्गा छैन,’ उनले भनिन, ‘जग्गा छैन् । घर कहाँ बनाउनु ?’ सीताको परिवारले शनिबार नयाँ घर बनाउनका निम्ति जस्तापाता पाएको छ । ‘जस्तापाता त पाइयो घर पो कहाँ बनाउने ?,’ उनले भनिन्।
‘बाढीले पुरानो घर भएको स्थानमा ठूलो भौडी बनाएको छ,’ बाढी पीडित वडा नं. ३ कै दिलविक्रम नेम्वाङ्ले भने, ‘दीर्घकालिन बस्ने केही उपाय छैन्। कसैले पनि तत्काल पुरानै ठाउँमा बस्नु भन्दै हुनुहन्छ ।’ उनका अनुसार, बाढीले कटान नहुने ठाउँमा सरकारी निकायले व्यवस्था गरेमा उत्तम हुने थियो । ‘पुरानो बाढीले बगाएको ठाउँमा गएर घर बनाउँदा पनि फेरि बिस्थापित हुनैंपर्छ,’ उनले भने ।
इटहरी वडा नं. ३ को सुनौलो टोलका बाढी पीडितमध्ये अहिले २५ घरपरिवार सडकमै पाल टागेर बस्दैं आएका छन् । यसरी बाल टागेर बस्दा पीडितले कष्टकर जीवन बिताउनु परेको छ ।
यसरी बिस्थापित २५ घर परिवारलाईं शनिबार प्रयास नेपाल संस्थाले जस्तापातासँगै खाद्यन्न सामग्री प्रदान गरियो । संस्थाकी अध्यक्ष मणी जोशी र भारतमा बस्ने भाइसली थकरले बिस्थापित परिवारलाईं तीन लाखभन्दा बढीको सामान उपलब्ध गराएका हुन् । बाढी पीडितलाईं सामान उपलब्ध गराउन नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्य राजीव ढुंगाना, काँग्रेस नेता रोहित प्रसाईं र विद्यार्थी नेता विकास केसीले समन्वय गरेका हुन् । नयाँ घर बनाउनका निम्ति वडा नं. ३ का वडाअध्यक्ष बालकृष्ण विष्टले भने बास र काटी कब्जा उपलब्ध गराउने भएका छन्।
वडा नं. ३ को तल्लो र माथिल्लो सुनौलो टोल गरि एक सय सात घर विस्थापित भएका थिए । विस्थापितमध्ये २५ घर परिवार सडकमै पाल टागेर बसेका छन् । अरु केही सीमित परिवार कोठा भाडा लिएर बसेका छन् भने अरु बाँकी आफ्नै पुरानो घरलाई मर्मत गरेर बसेका छन्।
इटहरी उपमहानगरपालिकाका चारवटा वडामा वडा नं. ३ सँगै, ४, ९ र १० मा बाढीले क्षती पुर्‍याउँदा छ सय घरपरिवारलाई असर गरेको छ।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७४ १६:४६ शनिबार
बाढी पीडित भन्छन् ठाउँ नै छैन घर कहाँ बनाउनु